2 ụzọ na-esure iMovie ka DVD
Mgbe eke ma ọ bụ edezi a video iji iMovie, ị nwere nhọrọ nke exporting video gị na ngwaọrụ ma ọ bụ nanị na-ahapụ ha na gị Mac maka mgbe e mesịrị ikiri. Ọ bụrụ na ị bụ ụdị nke na-nkiri na DVD maka ihe ụfọdụ mere, mgbe ahụ, ị ga-enwe obi ụtọ ịmara na ị nwekwara ike ọkụ gị iMovie gị DVD. Nke a na-kpọmkwem na-akwado iMovie software na ya mere, unu mkpa iji ọzọ software. Ke ibuotikọ emi, anyị ga-ahụ otú ọkụ iMovie nkiri ka DVD eji abụọ ụzọ dị iche iche ma ọ bụ software. Mbụ usoro bụ site na iji Wondershare Video Converter Ultimate. Nke bụ otu n'ime ndị kasị mma softwares isure iMovie ka DVD? The ọzọ usoro bụ site na iji iDVD software mezue ọrụ. Niile ụzọ ndị dị mfe, mfe na ogologo n'ihu.
Nkebi nke 1: Ọkụ iMovie ka DVD iji Wondershare Video Converter Ultimate
Nkebi nke 2: Ọkụ iMovie ka DVD iji iDVD
Wondershare Video Converter Ultimate Bụ otu nke kasị mma video converters si n'ebe na ọtụtụ functionalities na atụmatụ. Ọ bụ oge a na video Ntụgharị na nwere ọtụtụ ihe na-enye. Ọ bụghị naanị na ọ na-akwụsị converting videos, ọ na-ekwe ka ndị ọrụ na dezie videos, tinye mmetụta, tinye watermark ka videos na ọtụtụ ndị ọzọ.
Wondershare Video Converter Ultimate Bụ oge a na video Ntụgharị na nwere ọtụtụ ihe na-enye. Ọ na-enye obere edezi nke videos dị ka na-agbanwe agbanwe nghazi, trimming video, wdg I nwekwara ike ịgbakwunye mmetụta na watermark gị video na software.
Key Akụkụ nke Wondershare Video Converter Ultimate
Ị bụ n'aka ghara ida àgwà nke video ma ọ bụ mp3 mgbe converting na Wondershare Video Converter Ultimate
Na Wondershare Video Converter Ultimate ị nwere a dịgasị iche iche nke video àgwà na mmepụta format iji họrọ mgbe converting a video iji na-enweta zuru okè mma.
Ị nwekwara ike ịhọrọ ụdị nke ngwaọrụ ị na-eke ndị video n'ihi na otú na i nwere ike ejedebe na nke kacha mma mma video maka ngwaọrụ.
Ọsọ nke akakabarede nke Wondershare Video Converter Ultimate bụ kediegwu. Ọ atọghata vidiyo na a ọsọ 30 ugboro karịa ndị ọzọ video converters.
Ị pụrụ ọbụna ibudata vidiyo si na saịtị dị ka YouTube, Vimeo, Google Video na ndị ọzọ na video gụgharia saịtị na internet na dị nnọọ a click nke a bọtịnụ
Ị nwere ike ịmepụta otu MP3 faịlụ site a DVD ozugbo iji nke a software.
Mgbe eke ma ọ bụ edezi gị video na iMovie, i kwesịrị mbupụ ya n'ihu gị nwere ike ire ya na-DVD iji Wondershare Video Converter Ultimate.
Mbupụ gị oru ngo na Finder,
Nzọụkwụ 1: Mepee oru ngo na ị chọrọ mbupụ na iMovie ma ọ bụ họrọ oru ngo na oru ngo n'ọbá akwụkwọ ma họrọ ịkekọrịta họrọ bupu nkiri.
Nzọụkwụ 2: Pịnye aha nke nkiri na Export Dị ka ubi.
Nzọụkwụ 3: Họrọ ebe ebe ị chọrọ ịzọpụta nkiri si mmapụta menu.
Nzọụkwụ 4: Họrọ size na mkpebi nke nkiri na kasị mma na ọkụ ihe ị ga--na iji video maka.
Nzọụkwụ 5: Pịa Export mbupụ nkiri.
Mgbe exporting nkiri, ị ga-ahụ mkpa Wondershare Video Converter Ultimate ka ọ gbaa ya ka DVD.
Iji mee nke ahụ,
Nzọụkwụ 1: Mepee Wondershare Video Converter Ultimate na pịa apa ọkụ taabụ n'elu nke window.
Nzọụkwụ 2: ịdọrọ iMovie faịlụ na ị exported mbụ n'ime window.
Nzọụkwụ 3: Nye ndị DVD a aha ma họrọ mmepụta format ị chọrọ.
Nzọụkwụ 4: See "Ọkụ" button na ala nke window na-amalite na-ere ọkụ na DVD.
Ị nwere ike ọkụ a DVD enweghị a DVD disk, otú a chọrọ ka ị nwere DVD gị disk mbanye.
Isure iMovie ka DVD iji Idvd, i kwesịrị mbupụ na video si iMovie ka iDVD mgbe ahụ ọkụ ya.
Mgbe inserting a ide DVD na diski mbanye,
Nzọụkwụ 1: Mepee nkiri ị chọrọ gēsure iMovie na pịa na Share menu. Họrọ iDVD na-eche maka ya hazie.
Nzọụkwụ 2: The nkiri ga-emeghe na iDVD na a ọhụrụ oru ngo ga-kere na-akpaghị aka na ndabara isiokwu. Ị nwere ike họrọ a isiokwu, ịgbanwe aha, wdg ma ọ bụrụ na ị chọrọ.
Nzọụkwụ 3: Pịa "Ọkụ" button na-amalite usoro. Ọ bụrụ na ị na-ezute nsogbu ọ bụla, na-agbalị a dị iche iche na isiokwu.
Ị na-mgbagwoju anya ma na-ahọrọ Wondershare Video Converter Ultimate ma ọ bụ iDVD? The table n'okpuru na-egosi tụnyere n'etiti 2 softwares. Site data na tebụl, ọ na-egosi na Wondershare Video Converter Ultimate dị mma karịa iDVD n'ihi na o nwere ihe functionalities na atụmatụ na ya.
Olee otú iji Maps na nzụlite na iMovie maka Mac
Olee otú Mepụta ngwa Motion Videos na iMovie
Top 5 free online iMovie uzo ozo
5 Atụmatụ maka iMovie 11 mkpa ka ị mara
iMovie: Ọkụ iMovie ka DVD
> Resource> iMovie> 2 ụzọ na-esure iMovie ka DVD